अव प्रधानमन्त्री चीन जाने तैयारी
भारत गएर के भो ? भारत खुशी भयो होला, नेपाल र नेपालीका लागि खुशीको कोसेली केही आएन । खाली अमूर्त योजना आए । आज मर्‍यो भोलि ओखती भनेझैं, वर्तमान समस्यामा बेवास्ता गरेर भविष्यको जल, रेलमार्गको विकासमा भारतले सघाउने भो भन्ने पोकोभित्र अरु के के छ छ ?
अव प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको होमवर्क सुरु भएको छ । यसको तैयारीका लागि परराष्ट्रमन्त्री ६ दिन चीन बिताएर आएपछि भ्रमणको तिथिमिति तोकिने छ । एक हुल भारत भ्रमण गरेर स्वाद फेरेर आए, अव अर्को हुल चीन जानेछ र तिनले पनि स्वाद फेरेर आउने छ । यस्ता भ्रमणका लागि भ्रमण गर्ने बेला थिएन प्रधानमन्त्रीले । एक एक दिन महत्वपूर्ण थिए उनका लागि । रारा ताल किनारबाट देश निर्माणमा जुटौं भनेर आह्वान गर्ने प्रधानमन्त्रीले निर्माण कहाँबाट सुरु गर्ने, कसरी गर्ने भनेर विज्ञ बैठकसमेत गरेका छैनन् । सर्बज्ञाताहरुले भरिपूर्ण सरकार त होइन होला ? सरकारको इच्छाशक्तिलाई बल मद्दत गर्न विज्ञ विशेषज्ञहरु पनि चाहिन्छन् होला । खाली प्रशंसकको भीडको जयजयकार सुनेर मस्तराम हुने हो भने केपी ओली सरकार पनि कानै चिरिएको हुनेछ । यसले पाएको ऐतिहासिक जनसमर्थन हावादारी सावित हुन बेर लाग्नेछैन ।
सुरुमा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको विशेष निमन्त्रणामा परराष्ट्र मन्त्रीले प्रधानमन्त्री स्तरको भ्रमणको वातावरण बनाएर आउनेछन् । चीनका प्रधानमन्त्रीको निम्तो आइसकेको छ, ओली त्यो निम्तो मान्न त्यसपछि जानेछन् । चैत २३–२५ को भारत भ्रमण चीनकै सल्लाहमा भएको मान्ने हो भने पनि प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा चीनसँग गर्ने प्रस्तावहरु के के हुन् ? चीनले नेपालबाट खोजेको के के हो र नेपालले चीनको अपैक्षाालाई संवोधन के कसरी गर्न सक्छ ? यसबारेमा बृहद छलफल हुन जरुरी छ । नेपाल चीनको ओविओआरको समर्थक मुलुक हो तर चीनका राष्ट्रपति पुगेको बिमिस्टेकको बैठक नेपालले मिस गरेको छ । त्यसमाथि भारतस्थित नेपाली दूतावासमा दलाई लामाका प्रतिनिधि गुरुलाई भेटेर प्रधानमन्त्रीले चीनलाई सशंकित पनि पारिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ती स्वतन्त्र तिब्बतका पक्षधर गुरु माष्टरकर्मा तनपाईलाई भेट्न किन बाध्य भए ? यसमा भारतको चलखेल थियो कि थिएन । प्रश्न अनेक छन्, ओली सतर्क हुनुपर्छ ।